Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Kedu ihe kpatara eji aga Hawaii ugbu a? Gaa oge ọzọ!
Akụkọ mkpakọrịta • Aviation • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Enweghị ihe mere ị ga -eji gaa Hawaii ugbu a bụ ozi na nnọkọ mgbasa ozi nke Gọvanọ Ige kwuru taa. Ị debere ezumike gị na Hawaii? Ị nwere ike ịchọ ịtụgharị uche ngwa ngwa. Ndị Aloha Steeti na-eche oke ifufe nke ikpe COVID-19 ọhụrụ yana ọ nwere ike dịrị njikere ijikwa ihe na-abịa. Taa bụ ụbọchị ndekọ ndekọ ndekọ ọrịa ọhụrụ. Ndụmọdụ kacha mma nke Dr. Char, Director nke Ngalaba Ahụike Hawaii, bụ ịnọrọ n'ụlọ!
Elizabeth A. Char, MD, weghaara onye isi Ngalaba Ahụike Hawai'i na Septemba 16, 2020, mgbe Hawaii Gov. David Ige họpụtara ya.
Na nnọkọ mkparịta ụka ya na Gọvanọ Hawaii Ige, ọ gbara ndị mmadụ na Hawaii na ndị ọbịa ume ka ha nọrọ n'ụlọ ka ha ghara ime njem n'oge a.
Taa, a kọrọ akụkọ ọrịa 1,167 ọzọ na steeti Hawaii, ihe karịrị okpukpu abụọ nke ọnụ ọgụgụ kachasị elu edebanyere kemgbe ntiwapụ nke nje a.
Mgbasa nje agaghị agbanwe ruo mgbe anyị gbanwere, otu ụjọ ụjọ Elizabeth Char gwara ndị nta akụkọ na nnọkọ mgbasa ozi nke Gọvanọ Hawaii kpọrọ Ige n'ụtụtụ a.
N'ime akụkọ COVID-19 kachasị ọhụrụ sitere na gọọmentị nke Aloha Steeti, enwere ikpe COVID ọhụrụ 1,167, na -ebute ngụkọta ikpe ahụ ruo 49,564. N'ime mmadụ 2,971 chọrọ ụlọ ọgwụ.
Ọ bụ ezie na ohere ụlọ ọgwụ ka dị, mmetụta na-etolite etolite site na mgbasa obodo nke COVID-19 Delta dị iche na-ewepụ ume ọ bụghị naanị maka ndị ọrịa kamakwa maka onye ọ bụla nọ n'obodo.
Mgbe akwụkwọ a dọrọ aka ná ntị ndị ọbịa na mgbochi ọhụrụ ga -anọ, ọ bụ obere ihe anyị amaghị etu ọ ga -esi mee n'ime obere ụbọchị anọ.
Biko mee ihe ziri ezi wee gaa Hawaii oge ọzọ!
eTurboNews onye na -agụ, Nwada J, tinyere nkọwa n'akwụkwọ a na -asị:
Agaghị m akwado ịbịa Hawaii n'oge a. Na agbanyeghị mmachi ọ bụla dị ebe a n'ime izu abụọ, ị chọrọ n'ezie inwe ohere inwe ihe mberede ahụike yana nwee olile anya na ụfọdụ nọọsụ ma ọ bụ dọkịta dara ogbenye na -arụ ọrụ ugboro abụọ ma ọ bụ atọ ga -enwe oge iji nye gị ọgwụgwọ zuru oke?
Ihe na -ejupụta mgbe niile mgbe anyị nwere ọnụ ọgụgụ ndị njem dị elu. Ọ nwere ike bụrụ nnukwu ihe ịma aka ịbanye n'ụlọ oriri na ọ allowedụ allowedụ nke nwere pasent 50.
Ndị bi ebe ahụ nwere ike mee gị ihe ọma ma ọ bụ ghara ime ya nke ọma mana mgbe a na -anara ụmụaka anyị ụlọ ọgwụ, imirikiti anyị achọghị ka ị were ọgwụ ọgwụ anyị ebe a.
Ama m na akwụla ụgwọ njem gị, mana ọtụtụ ụgbọ elu na -agbanwe nke ọma ugbu a ma ọ dịkarịa ala dị njikere inye gị otuto n'ọdịnihu. Banyere ụlọ gị, ị nwere ike ịkọwa na ị na -agbalị ime ihe ziri ezi site n'ịchọghị ịtụ ụtụ akụ anyị wee hụ ihe na -eme.
Biko mee ihe dị mma wee bịa oge ọzọ.
Gọvanọ Ige mehiere mgbe o kwuru na imezigharị ihe mgbochi ndị ọzọ abịabeghị na efere. O doro anya, ebumnuche akụ na ụba na -ebute ụzọ, dịka ha na -eme na Florida, Texas, Louisiana, na ọtụtụ steeti US ndị ọzọ.
Ka ọ dị ugbu a, 77.98% nke ógbè US niile, nke bụ mkpokọta ógbè 2,511, na -edekọ ọnụ ọgụgụ kachasị elu na pasent mgbasa nke obodo nke nje a na -egbu egbu, yana ihe karịrị 10% nke ikpe ọhụrụ n'ime ọnụ ọgụgụ 100,000.
Ọtụtụ na -ekwu na Hawaii agaghị enwe ike mechie akụnụba njem ya. Agbanyeghị na mgbochi dị ebe a gụnyere iyi nkpuchi, ọkwa 50% n'ime ụlọ nri, yana oke maka ụlọ ahịa-naanị ha bụ ihe atụ. N'afọ gara aga, mmụba nke naanị ikpe 100 COVID kwa ụbọchị kpalitere usoro iwu steeti yana imechi mkpọchi zuru oke na ụlọ oriri na ọ hotelsụ, ụ, ụlọ ahịa na ụlọ nri.
Dị ka mgbe niile, ihe Ndị njem nleta Hawaii na -agbachi nkịtị na ọ naghị aza ụmụ amaala, ndị ọbịa na ndị nta akụkọ. Okwu ikpe 1,167 taa na -agabiga akara uhie maka ndị bi, mana onye na -ege ntị?
61.2% nke ngụkọta ndị mmadụ agbaala ọgwụ mgbochi ọ bụla. Ngụkọta ikpe a kọrọ n'ime ụbọchị 14 gara aga bụ 7,327. Ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ ruo taa bụ 547.
Anyị na -akwado ugbu a maka ajọ ifufe na ikpe COVID, Gọvanọ Hawaii kwuru taa. N'ịbụ onye a maara dị ka Gọvanọ na -adị jụụ mgbe niile, ọ mara jijiji na nnọkọ mgbasa ozi nke taa.
Na nzaghachi nye onye nta akụkọ AP, Gọvanọ tụgharịrị uche naanị 2% nke ikpe ọhụrụ dị n'etiti ndị ọbịa. Ndị ọbịa ga -enwerịrị ule na -adịghị mma ma ọ bụ akwụkwọ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Ndị nwere akwụkwọ ịgba ọgwụ mgbochi nwere ike ịdị mma ma na -efe efe, mana nke a agaghị ama.
Gọvanọ ahụ kwuru na nnukwu ihe egwu bụ mgbasa obodo na -agbasa nje. Otu onye nwere ike inye ya 1,000 ndị ọzọ. Gọvanọ na onye isi ahụike maka steeti kwenyere na nje a dị n'ime obodo, na -ekwetaghị na ndị njem nọ n'otu obodo.
N'ime ụwa nke ya, ndị isi Hawaii kwenyere na ndị njem na -agakarị mpaghara nke ha n'agwaetiti ndị ahụ, na -agakarị ụlọ nri na osimiri dị iche iche. Nke a amachaghị nke ọma na ọ dịkwa nnọọ anya n'eziokwu. Na obere agwaetiti dị ka Hawaii onye ọ bụla na-emekọ ihe, onye njem na-anọ ebe niile, Waikiki ma ọ bụ Lahaina abụghị mpaghara nwere mgbidi.
Dr. Char ziri ezi mgbe ọ na -ekwu na ọ nweghị ihe kpatara onye ọ bụla ga -eji mee njem n'oge a. Ọ gbakwụnyere, "ị maghị onye ị nọ n'akụkụ n'ụgbọ elu."
Ndị ọbịa na -eche mmachi njem ọhụụ maka Hawaii.
Kpachara anya mgbe ị nọ na Hawaii!
Ọnwa Nke Asatọ 13, 2021 na 20:50
Mahalo Ingrid maka nzaghachi obiọma gị. Daalụ maka ịgụ anyị. Ọ na -emetụta anyị niile. Akwagara m ebe a na 1988 ma anọwo m na -arụ ọrụ na njem nlegharị anya kemgbe 1976.
Ọ na -ewute m ịsị na njem ga -akwụsịrịrị! Mana ọ na -eme ruo mgbe anyị nwetara ezigbo nsogbu na nsogbu oge a na -edebeghị.
Ọ bụ ihe nwute, enweghị ntuziaka doro anya na steeti a, na ndị isi njem (HTA kpọmkwem) agbachila nkịtị kemgbe COVID-19 bidoro.
Ingrid Peterson kwuru ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 13, 2021 na 20:36
Ana m ekele gị nke ukwuu maka ikenye ozi a! (Site n'aka onye bi ebe a kwagara ebe a dị ka nwata na 1963.)
Ọnwa Nke Asatọ 13, 2021 na 20:35